သာလွန်ဇောင်းထက်| October 26, 2012 | Hits:7,875
snow October 26, 2012 - 8:33 pm အမျိုးသားရေးကာကွယ်ပေးပါ။
Reply swe htwe October 27, 2012 - 12:10 am That’s right.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ October 27, 2012 - 2:06 am ပြည်ပက အစွန်းရောက်တွေက ပြသာနာ ဖွနေတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
Reply Seagull October 26, 2012 - 11:30 pm အစက မသိလား၊ ချစ်ခဲ့မိတာ ငါ့အမှား
Reply tunaung October 27, 2012 - 11:28 am နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများခင်ဗျား
Reply mountain October 27, 2012 - 3:12 pm Killing of Burma army in Arakan state almost7arakanese died was devious condition that will be made to be broken unity. Burma army always open fire non- armed ethnic people that is noticed to betray on ethnic minority.It was worsen and enhanced to riot. There are many different on concept of this chaos as Burmese and Arakanese that Burma never try this problem basically because of they didn’t like arakan scenario.I wouldn’t like to military rule that will increase to disgust and corrupt in state where Military has only responsibility to be secure and not to be conflict again.Government was weaken to use diplomacy and failed by conspiracy and knockout of OIC and them its result got burning .”" struggle of arakan state is not to frustrate””.
Reply kyaw October 27, 2012 - 3:54 pm မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသိစေရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်နေ့ စဉ်သတင်းတွေဖက် စာစောင်တွေကြည် အင်တာနက်
Reply THIHA TUN October 27, 2012 - 10:44 pm Your comment reflects true concepts of humanism. Today, many burmese people use internet to disclose their thougths and opinions as they think it is free from responsibilities.They uses the savage and rude terms as possibly as they can find in burmese and English.But they have no ample wisdom to aware such kind of acts will negatively effect the image of entire burmese society. It is so disappointing to see that some burmese assume themselves as online heroes by posting rude and in inhumane comments on internet. Such acts can only show their lacks of humanity senses and rational thinking . Today’s Myanmars seems to be forgetting their present statuses as illegals in neighbouring countries and refugees in West.However, in these countries they are not subject to maltreatments ,discrimination or any acts which may adversely effect human dignity ,if they were legals or illegal .But some people in our society are still reluctant to accept concepts of humanitarianism with rational thinking. .
Reply မော်ကြီး October 28, 2012 - 9:36 am ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့မှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ အခုရခိုင်ပြည်ထဲရောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပုံစံအနေအထားလုံးဝကွာတာမို့ ဘယ်လိုမှယှဉ်ပြောလို့မရပါဘူး။ အဲဒါနှစ်ခုဘယ်လိုကွာတယ်ဆိုတာတော့ ပြောပြစရာမလိုလောက်အောင်သိသာထင်ရှားလွန်းပါတယ်။
Reply snow October 29, 2012 - 12:32 am ကျော်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး…
Reply Cho October 29, 2012 - 5:17 pm ကို Kyaw ရေ၊ ရေးထားတာ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ တက်တက်စင်အောင်လွဲနေတယ် လို့ ပြောလိုပါတယ်။ မြန်မာတွေတစ်ခြားနိုင်ငံတွေကိုခိုးဝင်တာက စားဝတ်နေရေး အတွက် ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာဖွေခြင်းနှင့် တစ်ချို့ကတော့ နိုင်ငံရေးအရ ယာယီခိုလှုံရန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-မလေးရှားရောက်မြန်မာများသည် မလေးရှားလူမျိုးများ (လူမျိုးရေး) ကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းတို့၏ဘာသာရေးကို လည်းကောင်း ၀ါးမျိုရန် မည်သူကမျှမကြိုးစားကြပါ။ ထိုင်းမှာလည်း အလားတူဖြစ်ပါသည်။ မိမိနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ ၀င်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့်သာ စွန့်စား သွားလာနေကြတာဖြစ်ပြီး၊ ယင်းနိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများစည်းကမ်းများကို လိုက်နာနေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ( မတစ်ထောင်သားများ ဖြစ်ကြသဖြင့် အနည်းငယ်သော လူနည်းစု၏ ဖေါက်ပြန်မှုတော့ ရှိနိုင်ပါသည်။ ) သို့သော် မြန်မာပြည်ရောက် ဘင်္ဂါလီများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာလူထု ( ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ) စိတ်ထဲတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် အထက်ကဖေါ်ပြခဲ့တာတွေထက် အခြေအနေ လုံးဝမတူပါ။ ဥပမာ-ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က မိန်းမတွေအများကြီးယူ ကလေးတွေ တပြွတ်ပြွတ်မွေးနေတော့ လူဦးရေအရလွှမ်းမိုးသွားမှာကြောက်ကြသည်။ ဘာသာရေးအရ ဗလီတွေဆောက် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတာ ဘာမှဝေဖန်စရာမရှိပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေ၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေလို ပြင်ပဘာသာဝင်တွေဝင်ခွင့်မရှိ တင်းကြပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ထင်သာမြင်သာမရှိမှုတွေ၊ ပိုဆိုသွားတာက မြန်မာမ
Reply Freedom arakan October 27, 2012 - 5:15 pm ဒါဆိုရင်လည်း ရခိုင်ပြည် ကိုကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တော့
Reply Freedom Bangali/Rohingya October 27, 2012 - 8:26 pm အဲလို ရခိုင်ပြည်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ကတော့ ဟားဟား.. ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့။ တာလီဘန်တွေထင်တိုင်းခြေချနိုင်မဲ့ ဒုတိယအာဖဂန်နစ်စတန် ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုယ့်လူရယ်။ အဟိ..
Reply Lay hone October 28, 2012 - 3:30 am Burma is not racist and Arakanese also not to be genocide. There were2million peoples entered to Thailand as employee due to lack of works in MYanmar. If Myanmar will has an opportunity of jobs ,all those come back our nation.
Reply THIHA TUN October 29, 2012 - 12:23 am To, lay hone ,
Reply thihamin October 28, 2012 - 4:21 am Kyawဆိုတဲ့ မောင်ရင်ရေ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုသလိုပေါ့။ မောင်ရင် ဥပမာက – နည်း နည်းချောတော့ ငေါထွက်သွားသလိုဖြစ်နေတယ်။ ထိုင်းကို ခိုးဝင်တဲ့ မြန်မာပြည်သား အလုပ် သမားတွေက ပြည်နယ်မတောင်းဘူး။ အရှင်းပြောရရင် သူတို့လုပ်ခကိုတောင်တိုးမတောင်း ဘူး။ သို့သော် မဲဆောက်မှာရှိတဲ့ မော်လမြိုင်အရေးအခင်းကထွက်လာတဲ့ မြန်မာပြည်က ကု လားတွေကတော့ တချိန်က မဲဆောက်မှာ သူတို့ကို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးပေးဘို့ တောင်းဆိုခဲ့ ဘူးတယ်။
Reply thihamin October 29, 2012 - 12:18 am ပြောရမှာတော့ စိတ်မကောင်းလှပါဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်ဘာသာဝင်နဲ့မှမတဲ့သူ၊ ပြ​ဿနာ